Rugby – «Silver cup 2018»: marary mafy ny Makis de Madagascar | NewsMada
Rugby – «Silver cup 2018»: marary mafy ny Makis de Madagascar
Rava hatreo ny nofinofin’ny Makis de Madagascar, amin’ny hiakarana ao amin’ny sokajy “gold cup”, amin’ny taona 2019. Resin’ny Mighty Zambia, teo amin’ny andro faharoa, amin’ny fifanintsanana “silver cup” mantsy ry zalahy.
Tsy mbola nisy ohatra ity, hatramin’izay nanaovana. Mijanona ao amin’ny “silver cup” na sokajy 1B, ny Makis de Madagascar, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja rugby. Nosakanan’ny Mighty Zambia mantsy ny lalan’ny Malagasy, ny asabotsy lasa teo. Resin’ny Zambianina, tamin’ny isa, 31 no ho 29 ny Makis, ho an’ny faritra atsimo. Vokatra tsy noeritreretin’ny rehetra satria firenena nanompo ny Malagasy ny Zambianina, raha rugby ny resaka.
Marary mafy ny Makis de Madagascar ka mila fitsaboana haingana. Betsaka ny azo lazaina, maro ny azo ambara, saingy ny hany azo hamehezana azy dia taratry ny savorovoro sy ny tsy fifankahazoana teo amin’ny mpitantana, izao aretina lalim-paka, mahazo ny Makis de Madagascar, izao.
Tsy fotoana hifanomezan-tsiny intsony izao, na ho an’ireo mpitantana, na ho an’ny mpilalao, na ho an’ny mpanazatra, na ho an’ny fanjakana. Samy diso ary samy marina, nefa koa samy tomponandraikitra, avokoa. Aleo hampandeferina ny hambompo rehetra ka hiaraka hamerina, ny lazan’ny rugby malagasy indray. Efa misongona an’i Madagasikara avokoa mantsy amin’izao fotoana izao, ireo ekipa resiny, fahiny. Ahina handingana an’i Madagasikara, atsy ho atsy , i Kaomoro sy i Mayotte ary i Maorisy, raha tsy voasoroka haingana, ity aretina mahazo ny Makis de Madagascar, ity. Mila fehezina hanara-dalàna ihany koa ireo mpilalao “expatriés”, raha mbola tiany, ny hiaro ny voninahi-pirenena, fa tsy havela hanao izay tiany akory, izy ireo.
Andrasan’ny rehetra ny ho fanazavana sy ny tatira, hoentin’ny mpitarika ny delegasiona sy ny mpanazatra ary ny kapitenin’ny ekipa, tamin’ity dian’ny Makis de Madagascar, tany Zambia, ity.